Qaramada Midoobay oo Sheegtay in Somalia ay Gar-gaar Cunto u Baahantahay – Radio Daljir
Nofeembar 28, 2015 7:58 b 0
Somalia, November 28, 2015-(Daljir)_Â Warbixin uu soo saaray xafiiska Isku duwidda arrimaha biniâ€™aadannimada u qaabilsan Qaramada Midoobay (UNOCHA) ayaa lagu sheegay in xaalad baniâ€™aadamnimo ay ka dhalatay roobab xooggan oo ka daâ€™ay deegaannada ay maraan webiyada Jubba iyo Shabeelle ee gudaha dalka Soomaaliya.
Waaxda hayâ€™adda FAO u qaabilsan biyaha iyo xogta dhulka ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo (SWALIM), ayaa laga soo xigtay in marka laga reebo Jowhar, heerka biyaha ee webiyada ay iminka tahay mid caadi ah, balse ay jirto khatar ka dhalatay fatahaad ay sameeyeen labada webi.
Hayâ€™adaÂ SWALIM ayaa warbixinteeda Â lagu sheegay in isu geynta dad lagu qiyaasay 144,000 ay saameeyeen daadad ka dhashay roobab xooggan oo daâ€™ayay tan iyo bishii October ee sanadkan.
Dadka ayaa badankooda ku nool gobollada Hiiraan, Jubbada hoose, Jubbada dhexe, Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha hoose. Xilli roobabka ay ku sii yaraanayaan gobollada qaar ee dalka, haddana roobab xooggan ayaa lagu soo warramayaa inay ka daâ€™ayaan degmooyinka Afgooye iyo Janaale ee gobolka Shabeellaha hoose, sidoo kale warbixinta SWALIM ayaa lagu sheegay in roobab xooggan ay ka daâ€™ayaan tuulooyinka Buulo-mareer iyo Shalambood ee Shabeelaha hoose
Madaxweynaha Somalia oo Booqanaya Indonesia